Galaxy S11 amalitelarị mmepe n'okpuru codename 'Picasso' | Androidsis
Samsung Galaxy S11 adịworị na mmepe n'okpuru aha 'Picasso'
Ọ bụ naanị otu ọnwa ka mmalite nke Galaxy S10ma Nnukwu South Korea amalitelarị mmepe nke Galaxy S11, flagship na -esote nke ga -abịa nke ọma nke ugbu a, nke na -eme nke ọma na omume.
Dabere na @UniverseIce, akaụntụ Twitter nke na -achọ ị nweta eziokwu, Samsung ejirila aha "Picasso" mee baptizim Galaxy S11., nke bụ onye ama ama onye Spain na -ese ihe.
O di nwute amabeghị ihe kpatara aha okike dị otu a. Aha codename ọhụrụ a dabara na codename nke Galaxy Note 10, nke bụ "Da Vinci". Ihe odide abụọ a bụ ndị omenkà. Nke a nwere ike na -egosi na ha bụ "ọkaibe", iji tinye ya n'ụzọ ahụ, ihe na -agaghị abụ ihe ezi uche dị na ya iche ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ha ga -abụ ọdụ kacha mma nke onye nrụpụta n'oge mmalite.
Galaxy S11 R & D koodu: Picasso pic.twitter.com/AOtMq61Rou
- Ice eluigwe na ala (@UniverseIce) Nwere ike 19, 2019
Aha codename ọhụrụ ahụ na -egosi ọnụnọ ụfọdụ atụmatụ nka na Galaxy S11. Ọ ga -amasị gị ịmara mmepụta ikpeazụ site na njedebe nke afọ a site na ụfọdụ ntụgharị na mgbapụta. Maka ugbu a, ihe ọ bụla nwere ike ibilite, ewezuga ozi a, nwere ike ọ gaghị akwado ya na ntụkwasị obi ebe ọ bụ na ha ga -abụ echiche dị anya maka ihe anyị nwere ike ịnwe n'aka n'afọ na -abịa.
Bụlagodi, Galaxy S11 ga -ebu ọtụtụ ọganihu ọhụrụ karịa Galaxy S10. A maara ụlọ ọrụ ahụ ka ọ na-arụ ọrụ na ngosipụta Infinity “ihuenyo zuru oke”, nke na-abịa na-enweghị oghere ma ọ bụ slides.
Ọzọkwa, a na-atụ anya na ọ ga-egosipụta ihe ngosi bezel zuru oke na igwefoto n'okpuru ihe ngosi Na na ọ na-abịa na nhazi etolitere na teknụzụ usoro 5nm FinFET nke EUV, nke ga-anọchite anya ọtụtụ ndozi na SoC flagship dị ugbu a.
Maka nkọwa ndị ọzọ, A na -atụ anya ihe ịga nke ọma na ngalaba niile, dị ka igwefoto, karịa ihe ọ bụla. Ọ ga -abụ ihe na -atọ ụtọ n'ezie ka ngalaba a ga -esi banye na ngwaọrụ flagship Samsung ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy S11 adịworị na mmepe n'okpuru aha 'Picasso'
Oukitel ga - amalite izipu nke ohuru na Y4800 ya na igwefoto mpx 48 ya